musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » dzidzo » Iyo Boomerang Nzira yeKurega Kukuru
dzidzo • vanhu • Singapore Kupwanya Nhau • Trending Now
rakanyorwa Avi Liran
Dale Carnegie akati "Hupenyu ibhoomerang. Zvaunopa, unowana.” Vashandirwi vangashandisa sei dzidziso iyi kushandura Iyo Great Resignation kuita mukana? Mumwe murume akaita izvozvo chaizvo, uye mugumisiro wacho waishamisa.
Vanopfuura mamirioni gumi nepfumbamwe vashandi vekuUS uye kuverenga vasiya mabasa gore rino. Iyi ndiyo nhamba yepamusoro-soro yakanyorwa neAmerican Bureau of Labor statistics munhoroondo. Maererano neMicrosoft, 19% yevashandi vekuSingapore vanoronga kusiya basa mukupera kwegore rino.
Izvo zvese zvekusaziva nezve Kukuru Kuregera uko kuri kufashama nhau uye yedu social media feeds yakapofumadza isu kubva kumikana mikuru iri mukati? Kuti tipindure izvozvo, tinofanira kutanga tatarisa kuti sei vakawanda vari kusiya mabasa avo.
Kunyange zvazvo chiri chokwadi kuti chikamu chikuru chevashandi vari kusiya mabasa avo nekuda kwekushaya dziviriro yevashandi, kushungurudzika, kusaremekedza uye kusagutsikana netsika dzesangano ravo, pane zvikonzero zvakasimba zvekusiya basa.
Denda re 'pressure cooker' rekuvharika uye kushanda-kubva-kumba-kuzviparadzanisa nevamwe kwakabvumira vazhinji nguva yekufungisisa uye kuongorora sarudzo dzebasa ravo. Izvi hazvina kungosundira vanhu kuti vaone kuti vanofanirwa kutsvaga mikana inoenderana nehunhu hwavo, asi zvakakurudzirawo vanhu kuti vatevedze mabasa avo uye zviroto zvavanoda.
Asi izvo, Aviva, mukuru weinishuwarenzi muUK, akawana kuti vangangoita makumi matanhatu muzana evashandi muUK vane chinangwa chekuchinja mabasa. Pamusoro peizvi, iyo silo mhedzisiro yetsika yemakambani, yakawedzera necovid, yasiya vashandi vazhinji vachinzwa vasina kubatana, vasingazivikanwe, uye vasingaonekwe. Izvi zvakaita kuti pave nechido chekuda munhu.
Nevanhu vazhinji pasi rose vachigadzirisa zvavanokoshesa, The Great Resignation inogona kuwonekwa sechinhu chinosimudzira mikana. Saka, isu sevashandirwi, chii chatingaite kana tarenda redu richibva? Tingashandisa sei izvi kutibatsira? Mutungamiri anofara angaita sei?
Mutungamiri anofadza anosvika
Greg Allan, aimbova maneja mukuru weMarriott muSingapore, Mutungamiriri & COO Aryaduta Hotel Group muIndonesia, mutungamiri ane hunyanzvi hwekugamuchira vaenzi. Akandidzidzisa chidzidzo chakakosha muna 2007 kuti mutungamiri anofadza anofanira kuita sei nyaya ine chekuita nekusiya basa kwevashandi vedu varipo.
Mugore iroro, mahotera akawanda matsva aitsvaga tarenda idzva, pakati pavo paiva nenzvimbo mbiri dzakabatanidzwa: Marina Bay Sands uye Resort World Sentosa yaida vanhu vanopfuura zviuru gumi nezvishanu. Vaizovhima kupi vakuru vakuru? Marriott aive pamusoro pechinyorwa chavo nekuti inozivikanwa kwazvo kuve netsika huru inogara ichivandudza nhengo dzechikwata chayo.
Greg aifanira kuita chimwe chinhu kumisa kubuda kwetarenda, saka akatanga "Operation Boomerang': Greg akaita sarudzo. Nemushandi wega wega ari kusiya basa, aizoisa nguva, simba, mutsa, uye tsigiro pachinzvimbo chekutaura kuodzwa mwoyo kwechisikigo kunonzwa kana vanhu vaunodyara mari uye nehanya nezororo. Zvakadzoka kwaari zvakamushamisa.
Anozivikanwa se'Chief Delighting Officer', munyori, nyanzvi yezvehupfumi uye mutauri wepasirese nyanzvi, Avi Liran anga achitsvaga nekuita shanduko yetsika dzinonakidza dzinoita kuti vashandi pamwe nevatengi vafare.
lenny ravich anoti:
Zvita 9, 2021 pa06: 09
Yakanyanya kugadzira chinyorwa. Kufunga kwepakutanga. Useful